BAASABOOR MACAAN AH: SHARAX, SAWIR, DABEECADO, NOOCYO BEERASHADA - SOOSAARKA DALAGGA
Waxyaabaha kala duwan ee basbaaska leh Antey
Dhammaan noocyo badan oo miro ah oo caan ah oo caan ku ah Bulgarian. Maanta waxaan ka sheekeyn doonaa ku saabsan noocyada basbaaska Antey - waxaan ku siin doonaa sharraxaadda, sifooyinka, qaar ka mid ah talooyin ku saabsan beerista iyo daryeelka.
"Antey" waa nooc dhexdhexaad ah oo ah basbaas kaas oo iska leh noocyo macaan. Si loo gaaro qaan gaar ah, waxay qaadataa 4-5 bilood laga bilaabo wakhtiga seeding.
Marka aad doorato noocyo basbaas ah, waa lagama maarmaan in la xisaabiyo ma aha oo kaliya dhadhanka (qadhaadh iyo qadhaadh) iyo muuqaal, laakiin sidoo kale cimilada (tusaale ahaan, gobolka Moscow iyo Siberia), xaaladaha sii kordhaya (dhulka furan ama koriyo) iyo kooxda dareenka miraha.
Kala duwanaantani waxay leedahay duurka si ciriiri ah - dhererkoodu wuxuu inta badan ka badan yahay nus mitir wuxuuna badanaaba gaadhaa 70 cm.Dhinaca kale, baadiyaha waa soo jiidasho leh, waxay leeyihiin xididada xoog leh iyo afkoda.
Midhaha "Anthea" waa mid aad u qurux badan. Ka dib marka ay koraan, waxay helayaan midab cas oo casaan ah. Laakiin xitaa intaa in ka badan, halka basbaasku ay ku yeeshaan xoog iyo casiir, midabkooda cagaaran ee wanaagsan waxay ku farxi karaan isha.
Qaabku wuxuu u egyahay mugdi la gooyey ama Ahraam. Midhuhu waa fareem, weyn, miisaanka wuxuu noqon karaa ilaa 300 garaam.
Wax badan ka baro noocyada noocyada kala duwan ee basbaaska Bulgarian sida "dhagxaan maqaarka", "mucjisada calaamad", "muuska cagaaran", "liqid", "Claudio f1", "Atlant", "Kakadu", "Habanero", "Ratunda", "Bogatyr "," Gypsy f1 ".
Pepper "Antey", sida waafaqsan sifooyinka, waxaa loogu talagalay beerista xaaladaha cimilada diiran. Sida ugu fiican oo dhan, wuxuu dareemayaa naftiisa ee Ukraine iyo Moldova. Waa kala duwanaansho dhexdhexaad ah, waxay qaadataa 4-5 bilood laga bilaabo wakhtiga beereedka loogu talagalay bisaylka buuxa.
Waxaa loo isticmaalaa caanaha iyo cunista ceeriin. Cuntada jilicsan iyo macaan ee miro ayaa ku habboon wax kasta.
Faa'iidooyinka ugu muhiimsan ee noocyo kala duwan, shaki la'aan, waa dhadhanka khudradda iyo muuqaalkiisa cajiibka ah. Laakiin ma aha oo keliya:
awooda lagu cuno mar hore marxaladda boodhka farsamada;
awood u lahaanshaha fitamiin C;
ma qallafsanaan doono cilladaha;
iska caabinta cudurada iyo xaaladaha buufiska.
Dhibaato Waxaa loo tixgelin karaa dalbashada bacriminta ciidda iyo dareenka xajmiga ugu yar ee dhulka.
Qaababka geedo sii kordhaya
Antey waxaa lagu talinayaa in ay koraan oo kaliya iyada oo ay ka caawiyaan geedo. Noocyada noocan oo kale ah waxay si fiican u qaadaan xididada cajalado gaar ah. Dhulka waxaa ugu wanaagsan inay geedo ku beeri karaan da'da 25-50 maalmood. Sidaa darteed, taariikhda abuurka abuurka - badhtamaha March.
Waa muhiim! Ka hor inta beero, abuurka waa in lagu qooyay xal xashiishadda ama daawada antifungal (Fitosporin, Maxim).
Ka dib markii in, ku faafin abuur ah si ay u qalalaan iyo Gagaab heerkul ah 23-25 ​​° C. Labo isbuuc gudahood, xididada ayaa soo baxaya. Oo, isagoo taxadar leh, waxaa lagu beeray karaa cajaladaha diyaarinta.
Ciidda geedo ee basbaas waa inay ku jiraan humus ama compost (2 qaybood), peat (2 qaybood), ciid (1 qayb). Isku darkaani waxaa la doorbidaa in lagu daweeyo kuleyl kulul. Buuxi weelka dhalidda leh carrada, laakiin maaha gebi ahaan, ka tag 1-2 cm ilaa gees.
Si taxadar leh, oo leh ciriiri ama qalab kale, si aaney u waxyeeleynin xididada, faafinayaan abuurka, iyaga oo u dhaxeeya 2-3 cm meel. Ku dabool daboolka carrada oo yar yar. Waraabinta waa in si taxaddar leh loo sameeyaa si aan miraha aan la dhaqin. Waxaa habboon in tan la sameeyo iyada oo buufin leh. Waxaad sidoo kale dabooli kartaa weelka leh filim si aad u ilaaliso qoyaanka.
Muddo toddobaad ah, abuurka ayaa soo baxaya. Hadda waxa la gelin karaa iftiinka iyo meel qabow - heerkulka koritaanka waa inuu ahaado qiyaastii 17 ° C. Wakhti ahaan, weelka leh geedo waa in loo rogaa dhinaca kale si ay geedo aan ku tiirsanayn hal dhinac. Sii wad waraabin leh qori buufin leh, biyo diirran.
Ma taqaanaa? Paprika, ama basbaas macaan, aagaggeenna waxaa loogu yeeraa Bulgarian. Ma jiro macluumaad sax ah oo ku saabsan asalka magaciisa. Waxaa la aaminsan yahay in basbaaskan uu halkan ka yimid Bulgaria.
Marka heerkulka la dhigo 15-20 ° C, geedo waxaa lagu beeray dhul furan.
Ka hor inta aan la beeri dhirta dhalinyarada, ka taxaddar qaabeynta ururka. Ciidda "Anthea" waxay u baahan tahay diirran, dabacsan, oo leh acidit dhexdhexaad ah. Sidaa daraadeed, carrada culus, marka hore waxay sameeyaan dheecaan iyo gargaar - ku dar digo dhexdhexaad ah iyo dhagax la jajabiyey.
Waxaad xiiseyn doontaa inaad wax ka akhrido dhaymo dhadhan ah.
Kaabashka, digirta, iyo khudradda ayaa loo tixgelin karaa kuwa wanaagsan ee basbaaska. Ka dib iyaga, basbaas ayaa si weyn u kori doona. Waxaa lagama maarmaan ah in ay bixiyaan basbaaska joogta ah oo badan. Iyadoo aan lahayn, miraha ma helayso miisaan iyo jidheed ku filan.
Kadib walbaha biyaha ama roobka, hubso inaad xakamayso iyo hilling. Caleemaha geedku waxay u baahan yihiin helitaanka hawada. Xayawaanka cufan, khudradda ayaa joojisa horumarkeeda. U hubso inaad nadiifiso aagga. Ka saar haramaha iyo fal-samaynta foosha.
Waa muhiim! Marka la abaabulayo waraabinta waraabka, tirada iyo qoto-dheeraanta dabacsanaanta waa inay si weyn uga hooseysaa iyada oo aan lahayn.
Ma taqaanaa? Biyaha dhul-beereedka waxaa loo tixgeliyaa inay noqoto Hindiya. Waxay ahayd meeshii laga helay isaga sharraxaadkii hore, oo ka badan 3000 sano.
Sidaas, waxaan xaqiijinay in Biberey macaan macaan waa xulasho weyn ee beeritaanka beertaada. Raac shuruucda fudud - iyo midhihi aad u qurux badan, marwalba wuu ku farxi doonaa.